श्रममन्त्री श्रेष्ठले ४ दिनमै सार्वजनिक गरे सम्पति विवरण, हेर्नुहोस् कति छ सम्पति ? - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
श्रममन्त्री श्रेष्ठले ४ दिनमै सार्वजनिक गरे सम्पति विवरण, हेर्नुहोस् कति छ सम्पति ?
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ ‘किसान’ले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्री बनेको चार दिनमै उनले सबैभन्दा छिटो आफ्नो अरबाैँको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।
नेपालमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्री नियुक्त भएको चौथो (चार) दिनमै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उनले सर्वाजनिक गरेको जग्गा विवरणमा काठमाडौँका तीन स्थानमा आफ्नो जग्गा रहेको खुलाएका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिका वडा-९ मा कित्ता नम्बर ११४, ०-८-०-० क्षेत्रमा र खरिद मूल्य ७४ लाख ७५ हजार २५६ रुपैयाँ ९९ पैसा रहेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर-३ मा कित्ता नम्बर १ सय आठ, ४२९.१४ क्षेत्रमा र खरिद मूल्य ३९ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने काठमाडौं महानगरपालिका वडा-१ मा कित्ता नम्बर २१५१, २१५२, २२२७ र २४९४, ०-८-३-३ क्षेत्रमा र खरिद मूल्य ६९ लाख रहेको उल्लेख छ ।
मन्त्री श्रेष्ठ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेका हुन् ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: सोमबार, असोज २५ २०७८ २२:०३:०८